Shiinaha 4 TON 4 × 4 Afar wareeg oo soo saare iyo soo-saare ah Forklift | Wilk
WIK4 gaari xamuul ah oo forklift ah wuxuu leeyahay waqti-buuxa oo afar-taayir leh, kaas oo si weyn u xoojiya awoodda forklift. Waa baabuur injineernimo oo si badbaado leh oo hufan u fulin karta alaab rarista, dejinta, isku soo ururinta iyo wax ka qabashada howlaha dhulka aan sinnayn sida dhoobada, beeraha, iyo buuraha. Waxay leedahay waxqabadka ka baxsan wadada, waxqabadka iyo dhaqaajinta. Waxay beddeli kartaa lifaaqyo kala duwan si loo hagaajiyo waxtarka shaqada. Qalab loogu talo galay rarista iyo dejinta qalabka xarumaha wax lagu qeybiyo oo leh xaalado waddo xumo sida garoomada diyaaradaha, dekedda, iyo saldhigyada.
WIK 4 gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida forklift:
1. Muuqaal qurux badan, qaab dhismeed is haysta, gacan yar oo leexasho, iftiin iyo hawlgal dabacsan, wuxuu ku shaqeyn karaa meel yar, isteerinka awooda haydarka oo buuxa, isteerinka iyo kursiga xagal la hagaajin karo iyo booska qaraabada hore iyo gadaal, si loo kordhiyo shuruudaha shaqsiyadeed ee darawalka .
2. Dejinta joysticks kala duwan ayaa lagu hagaajiyaa iyadoo la raacayo shuruudaha ergonomiska si loo yareeyo xoogga shaqaalaha loona hagaajiyo waxtarka wax soo saarka.
3. Ballaaran aragti ballaaran, darawalku wuxuu leeyahay aragti ballaadhan, sidaa darteed forklift-kan ayaa aad ugu habboon soo dejinta iyo dejinta, isdulsaaridda iyo gaadiidka masaafada gaaban ee duurka ku jira iyo dibedda.
(1) Waxay leedahay marin wanaagsan iyo waddo-ka-dhan-wadista gawaarida. Ma jiro farqi u dhexeeya ulaha iyo taayirro ballac weyn oo ballaadhan oo wadada ka baxsan. Banaynta dhulka ugu yar ee gaadhiga waa in ka badan 300mm xagasha bixitaankuna waxay ka badan tahay 30 °.
(2) Isticmaal shaxan qeexan. Xagasha lulid ee jirku guud ahaan waa ± 30 ° ~ 40 °. Nidaamka isteerinka waa mid fudud oo uma baahna fiilooyin wadista gawaarida qaaliga ah. Waxay ku guuleysan kartaa gacan yar oo leexasho ah, wax ka qaban karta isteerinka si loo jaro meertada oo kale, kana dhig fargeetooyinka inay si sahal ah isugu waafajiso Qalabka, forkift-yada dherer-dhererka-yar-yar-yar-yar, waxaa loo isticmaali karaa qaab-dhismeed aan caadi ahayn iyo quful kala duwan oo ku yaal dariiq dhexaad ah.
(3) Baaskiil-lugo dhan. Marka laga reebo forklifts-tonnage-yada yar yar ee adeegsada bareegyada kabaha ee sii ballaaranaya, badankoodu waa biriigaha birta, iyo qaar ka mid ah fargeetooyinka culus ayaa sidoo kale isticmaala biriiga qoyan. Bareegga baarkinku waa bareegga gacanta ee ugu caansan.
(4) Loogu talagalay 2t ~ 3t forklifts iskudhaf ah, xaglaha hore iyo gadaal waa caadi.
(5) Wareegga dambe ee forklift-ka iskutallaabta waddanka ayaa lagu dhejiyay xayndaabka, safka horena wuxuu u taagnaan karaa si toos ah ± 8 ° ~ 12 ° marka loo eego qarka. Dhululubo taageerta ayaa la dhigay inta udhaxeysa xarkaha iyo tiirarka hore. Marka forklift uu qaadanayo, saqafka wiishka waxaa lagu hayaa xaalad biibiile dhinaca ah iyadoo la maareynayo silsiladda korantada; marka forklift uu wado, qolalka kore iyo hoose ee hawo-haweedka ayaa loo oggol yahay inay maraan godadka qoyaanka ah ee collude, taas oo faa'iido u leh hagaajinta raaxada socodka gaariga.
(6) Waxaa jira meel lagu sii jiido gawaarida weyn iyo kursiga lagu socdo. Kordhi xasiloonida jihada iyo dhaadheer ee forklift.
(7) Dhaqdhaqaaq wanaagsan. Xawaaraha ugu badan ee gawaarida guud ahaan waa (30-40) km / saacaddii. Awoodda korantadu waxay ka sarreysaa 0.65, xawaaraha wadista ayaa wanaagsan, waxayna leedahay awood fuulitaan oo ah 25 ° ~ 30 °.
(8) Xagal xagal ballaadhan. Tani waxay lagama maarmaan u tahay hawlgal ammaan ah iyo wadista dhulka aan sinnayn, guud ahaan 10 ° ~ 15 ° hore iyo 15 ° gadaal.
(9) Dejinta kursiga wadaha. Si loo hubiyo in wadaha uu leeyahay aragti fiican inta lagu jiro howlaha rarka, kursiga wadaha guud ahaan horay ayaa loo dhigaa. Wixii forklifts farshaxanno, ku dheji salka hore sida ugu macquulsan.
WIK 4 gawaarida gawaarida gawaarida forklift ee xuduudaha la xiriira:
Rug lagu qiimeeyay (kg)
Dhererka dheecaanka (mm)
Tayada baabuurta (kg)
Sare u kaca abbid (°)
“Gawaarida afarta taayir leh”
Nadiifinta hore ee mast (mm)
Xarunta dhexe ee gawaarida tareenka waxay ku taal barxadda dhulka (mm)
Radius ugu yar (mm)
Awoodda mishiinka (kw)
Adeegso shaxan qeexan. Xagasha lulid ee jirku guud ahaan waa ± 30 ° ~ 40 °. Nidaamka isteerinka waa mid fudud oo uma baahna fiilooyin wadista gawaarida qaaliga ah. Waxay ku guuleysan kartaa gacan yar oo leexasho ah, wax ka qaban karta isteerinka si loo jaro meertada oo kale, kana dhig fargeetooyinka inay si sahal ah isugu waafajiso Qalabka, forkift-yada dherer-dhererka-yar-yar-yar-yar, waxaa loo isticmaali karaa qaab-dhismeed aan caadi ahayn iyo quful kala duwan oo ku yaal dariiq dhexaad ah.
Qaybta dambe ee gaadhiga iskutallaabta waddanka ah ayaa ku dheggan meegaarka, oo wiishka horena si toos ah ayuu u laalaadi karaa ± 8 ° ~ 12 ° marka loo eego xayndaabka. Dhululubo taageere ah ayaa lagu rakibay inta udhaxeysa xarkaha iyo tiirarka hore. Marka forklift uu qaadanayo, saqafka wiishka waxaa lagu hayaa xaalad biibiile dhinaca ah iyadoo la maareynayo silsiladda korantada; marka gaadhigu socdo, qolalka sare iyo hoose ee hawo-mareenka Haydarooliga ayaa la sameeyaa Isku-xidhka daloolka godku wuxuu caawiyaa hagaajinta raaxada raacista gaariga.
4 gaari xamuul ah oo forklift ah oo leh shaam aad u xoog badan ayaa loo adeegsadaa soo dejinta iyo dejinta qalabka xarumaha wax lagu qeybiyo oo leh xaalado waddo xumo sida garoomada diyaaradaha, dekedaha, iyo saldhigyada. Waxay leedahay dhaqdhaqaaq wanaagsan iyo waxqabadka wadada-banaanka ee gawaarida caadiga ah ee wadada ka baxsan iyo waxqabadka warshadaha ee forklifts caadiga ah. Waxaa la dhihi karaa waa isku dhaf awood leh. Xawaaraha forklift-ka-baxsan wuxuu ka sarreeyaa kan forklift-ka caadiga ah, taas oo muujineysa in dhaqdhaqaaqiisa uu sidoo kale yahay mid gaar ah si si fiican loola qabsado jawiga shaqada. Jidhku wuu ballaadhan yahay, oo qaadi kara xamuul aan caadi ahayn oo ballaadhan; Banaynta ballaaran ee dhulka ka jirta ayaa ah in la fududeeyo caqabadaha ka gudbaya goobta; waxqabadka afarta lugood leh ayaa ah in la hubiyo shaqada caadiga ah ee goobta dhiiqada leh, in la tayeeyo qalabka shaqada, lagana soo dejiyo xoog iyo jab weyn, jabin toos ah oo loo dejiyo rarka, waxtarka shaqada sare iyo isticmaalka shidaalka oo hooseeya.
4 gawaarida gawaarida forklift waa aaladda ugu weyn ee rarida iyo dejinta howlaha marka la eego xaaladaha goobta. Waxay leedahay dhaqdhaqaaq wanaagsan ee gawaarida caadiga ah ee wadada ka baxsan iyo ku-dhaqanka warshadaha ee forklifts-ka caadiga ah. Giraangiraha wadista guud ahaan waxay qaataan laf-dhabarka, qaabka qoto dheer, iyo gawaarida ballaaran ee xuduudaha. Taayirada. Qalabka gudbinta waxaa lagu qalabeeyaa quful kaladuwan ama farsamo yar oo sibiibix ah si loo hubiyo in taayirada gaariga oo dhan ay ku siiban doonaan wadada qoyan. Marka la eego qaab dhismeedka, si loo hubiyo in gaariga uusan ku rogi doonin xaaladaha waddooyinka ka baxsan, iyadoo lala kulmayo awoodda qaadista ee lagu qiimeeyay gaariga. Hubinta xasilloonida dambe ee gaariga adoo kordhinaya xarig-gacmeedka, taas oo markaa lagu hubinayo nabadgelyada wadaha, gaariga iyo xamuulka
4 gawaarida gawaarida forklift wuxuu aqbalaa gudbinta afarta taayir. Giraangiraha hore iyo gadaal waxaa ku socda awood. Xuddunta soo-saaridda mishiinka waxaa loo qaybin karaa dhammaan giraangiraha hore iyo gadaalba iyadoo loo dhigayo heerar kala duwan iyadoo loo eegayo xaaladaha waddooyinka kala duwan. Waxay ku qalabeysan tahay qalab ka hortagga barafka, mashiinka iyo qaabeynta qaab dhismeedka gearbox. Waa mid iswaafajsan oo ka shaqeyn kara waddooyinka isku dhafan sida duurka, buuraha, iyo waddooyinka dhiiqada leh. Giraangiraha si fudud uma siiban doonaan marka xaaladaha waddadu xun yihiin. Awood gudbinta badanaa waa gudbinta haydarooliga ama gudbinta hydrostatic, oo leh dhaqdhaqaaq wanaagsan iyo marin u gudub.
Hore: 3.5 TON 4 × 4 Afar wareeg oo Forklift ah
Xiga: isagu waa astaamaha qaabdhismeedka ugu muhiimsan iyo adeegsiga tikniyoolajiyadda casriga ee WIK30-25 Backhoe loader